Virus | Sanchaung Journal
Memory Stick ထဲမှနေ၍ ဖျက်ဆီးအားကောင်းသော Virus တစ်မျိုး ပျံ့ နှံလျှက်ရှိနေပါသည်။အဆိုပါ Virus သည် Memory Stick မှ အလိုအလျှေက် program တစ်ပုဒ်ကို အလုပ်လုပ်စေပြီး ၊ Mouse Pointer တွင်
“Happy Birthday” ဟူသော Caption စာတန်းဦးစွာ ပေါ်လာသည်။နောက် Virus စစ်ဆေးနေသည် ဟု ခေါင်းစဉ်ပါသော Program တစ်ပုဒ်ကို ထင်ရှားစွာ အလုပ်လုပ်စေသည်၊ User အများစုသည် Virus စစ်ဆေးနေသည်ဟူ ထင်မှတ်ကာ ကြည့်နေကြသည်။ အမှန်က Virus သည် သင်၏ Windows System ကို ဖျက်ဆီနေခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုကြောင့် Memory Stick များကို သတိထားပါ။ Email အ၀င်များကို သတိထားပါ။ “Happy Birthday” စာတန်းတစ်ခု Mouse Pointer အနားတွင်မြင်ရပါက၊ Virus စစ်ဆေးနေသည် ဟု ခေါင်းစဉ်ပါသော သင်မမြင်ဖူးသည့် program တစ်ပုဒ် အလိုလို အလုပ်လုပ်နေပါက၊ကွန်ပျူတာ၏ Power Switch ကို ချက်ချင်းပိတ်ပါ။ Memory Stick ကို ဆွဲထုတ်ပါ။Memory Stick ကိုမသုံးပဲ ကွန်ပျူတာကို ပြန်ဖွင့်ပါ။ Windows System အလုပ်လုပ်နေလျှင် သင် Virus ၏ ဖျက်ဆီးခံရခြင်းကင်းဝေးသွားပါပြီ။ Virus ၏ ဖျက်ဆီးခံရခြင်းကင်းဝေးပါစေ။
When you see the strange program running with the message “Killing Virus”, turn off the computer immediately. When you see “Happy Birthday” caption on the mouse pointer, turn off the computer immediately.
It isavery dangerous virus!!!!